သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> ဂဟေထားသည့်ပစ္စည်း -> မြင့်မားတဲ့ကြိမ်နှုန်းဂဟေဘူတာ
ကြှနျုပျတို့မှာ XYTRONIC INDUSTRIES LTD. တစ်အရည်အသွေးမြင့်မားများထုတ်လုပ်အတွက်စေ့စပ်သော မြင့်မားတဲ့ကြိမ်နှုန်းဂဟေဘူတာ အရာဈေးကွက်ထဲမှာရရှိနိုင်ကုန်ကြမ်းအရည်အသွေးအကောင်းဆုံးကို အသုံးပြု. ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဒါတွေကအရည်အသွေးနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအမျိုးမျိုးအမျိုးသားရေးနှင့်နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းနှုန်းအဖြစ်ဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်နေကြပါတယ်။ ကျနော်တို့ထုတ်ကုန်စည်းမျဉ်းကောင်အားဖြင့်သတ်မှတ်စံနှုန်းအတိုင်းထုတ်လုပ်နေသောသေချာပါစေ။
ထုတ်ကုန်ရရှိနိုင်ပါသည်။ နေ့စွဲ, ပို. ပို. clients များ, တရုတ်ထံမှ Oceania, ဂျပန်အထိ, ကိုရီးယား, အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်းနှင့်အမေရိကန်နှင့်ဥရောပနိုင်ငံများမှ၏အစိတ်အပိုင်းမှအိမ်မှာပြည်တွင်းပြည်ပနှစ်ခုစလုံးကောင်းတစ်ခုဂုဏ်သိက္ခာကိုအနိုင်ရခဲ့ရသောကြောင့်ထုတ်ကုန်များ, ရွေးဖို့စတင်ခဲ့ပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ဟာစင်ကြယ်သောနှလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မှစ. ငါတို့သည်အကောင်းဆက်ဆံရေးကိုတည်ထောင်နိုင်သေချာဖြစ်ကြ၏။ ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်မှအခမဲ့ခံစားရ, ငါတို့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သတင်းအချက်အလက်, ထိပ်တန်းအရည်အသွေးရှိတဲ့ထုတ်ကုန်များ, အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းနှင့်ထိရောက်သော services.For နှင့်အတူအားလုံးအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသင်ကျေနပ်အောင်မှသေချာ, ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါရန်တွန့်ဆုတ်ဘယ်တော့မှမပေးပါ။
3. ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေ power supply ။
မည်သည့်ကြီးမားသောဂဟေဆက်နှင့်တွေ့ဆုံရန်လာသောအခါ 4. ပြီးပြည့်စုံသောဂဟေဆော်ဖြစ်လာရန်။
5. Specially ခဲအခမဲ့ဂဟေများအတွက်ဒီဇိုင်းလုပ်ခဲ့တာပါ။
အလွန်လျင်မြန်သောအပူချိန်တက်မြန်နှုန်းကခန့်ဖြစ်ပါတယ်။ 300 စင်တီဂရိတ်ဒီဂရီမှအခန်းအပူချိန်ကနေ 13 စက္ကန့်။
6. Intellectual နှင့်ပြီးပြည့်စုံသောဂဟေဆော်, ဂဟေဆော်အချက်နှင့်အတူပြောင်းလဲပေးသောအစွမ်းထက် power supply ။ မည်သည့်ကြီးမားသောဂဟေအမှတ်တွေ့ဆုံသောအခါပြီးပြည့်စုံသောဂဟေဆော်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ soldering သောအခါအနိမ့်အပူချိန်ကြောင့်ဂဟေအကြံပေးချက်များသည်အသက်တာကိုရှည်အောင်နိုင်မှုကြောင့်အအေးဂဟေဆော်ရန်လုံခြုံမှုမရှိခြင်းဂဟေဆက်ခြင်းကိုရှောင်ရှားနိုင်ပါတယ်။
အော်တို dormancy function ကိုနဲ့အတူ 7. ကြောင့်စွမ်းအင်ကိုကယ်တင်နိုင်ပါတယ်။
စကားဝှက်ကိုသော့ခတ် function ကိုနဲ့အတူ 8.
အပူပေးစက်များနှင့်အကြံပြုချက်များကိုသူတို့ထဲကတယောက်စနစ်တကျအလုပ်လုပ်မနိုင်သည့်အခါဒီဒီဇိုင်းကိုအတူတကွပြောင်းလဲနေတဲ့အပူပေးစက်များနှင့်အကြံပြုချက်များကိုရှောင်ရှားနိုင်, ခွဲခြားထားပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကုန်ကျစရိတ်ကိုကယ်တင်နိုင်ပါတယ်။
လျှောက်လွှာ: ခဲအခမဲ့ဂဟေဆက်, မြင့်မြင့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်အစိတ်အပိုင်းများနှင့်တောင်းဆိုပလီကေးရှင်းသည်။